PUBG MOBILE 0.14.0 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 0.14.0 လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
ဂိမ္းမ်ား အက္ရွင္ PUBG MOBILE
PUBG MOBILE ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
TENCENT GAMES USER AGREEMENT: https:www.pubgmobile.comterms.html
Official site: http:www.pubgmobile.com
မိုဘိုင်းအတွက်သီးသန့်ထုတ်လုပ်ထားတဲ့တာဝန်ရှိသူတဦးက PLAYERUNKNOWN'S စစ်။ အခမဲ့အချိန်မရွေး, နေရာမရွေး Play ။ PUBG MOBILE မိုဘိုင်းပေါ်တွင်အများဆုံးပြင်းထန်သောအခမဲ့-to-play action ကိုကယ်တင်တတ်၏။ အတွက် drop တက်ဂီယာနှင့်ယှဉ်ပြိုင်။ မော်ကွန်း 100-player ကိုတိုက်ပွဲနှင့်အစာရှောင်ခြင်းအတိတ် 4v4 အဖွဲ့ deathmatch နှင့်ဖုတ်ကောင် Modes သာရှင်သန်ရပ်တည်။ အနိုင်ပေးရပ်နေနောက်ဆုံးပါတကား။ တစေသတည်း
"လုံးဝထူးခြားတဲ့" - IGN
"ဒါဟာကြောက်မက်ဘွယ်ပါပဲ။ " - Pocket ဂိမ်းကစားသူ
"ကစားသမားတွေပြန်လာမယ့်သိမ်းထားပြီး" - ဒု
တစ်နှစ်တာ၏ 2018 မိုဘိုင်းဂိမ်း - ရွှေ Joystick တို့ဆုချီးမြှင့်
ထိပ်တန်းအခမဲ့ iPhone ကိုဂိမ်း 2018 - Apple က App Store ကို
မိုဘိုင်းပေါ်တွင်အခမဲ့ - သွားလာရင်း console ကိုအရည်အသွေးကိုဂိမ်း Play ။ မေးရိုး-ကျဆင်းနေ HD ကိုဂရပ်ဖစ်နှင့် 3D သံကိုကယ်တင်တတ်၏။ စိတ်ကြိုက်မိုဘိုင်းထိန်းချုပ်မှု, သင်တန်းပေးခြင်းသည် Modes နှင့်စကားသံကိုချက်တင် featuring ။ အဆိုပါ Unreal Engine ကို4ကတော။
ဧရာ Battle Maps - အေးစက်နေတဲ့ tundra, မြို့ပြမြို့နေရာများနှင့်သိပ်သည်းတော - အရွယ်အစား, မြေပြင်အနေအထားများနှင့်ရာသီဥတုကွဲပြားလေးထူးခြားတဲ့ပွိုအပေါ်ယှဉ်ပြိုင်ပါ။ အနိုင်ရသင့်ကိုယ်ပိုင်မဟာဗျူဟာမြောက်ချဉ်းကပ်မှုကိုဖန်တီးရန်တစ်ဦးချင်းစီစစ်ရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်များကိုကျွမ်းကျင်။
နက်ရှိုင်းမှုနှင့်မျိုးစုံ - တစ်ကိုယ်တော်, Duo နဲ့ 4-player ကိုကစားသမားအတွက် Play ။ ပထမဦးစွာ-person shooters နှင့်တတိယပုဂ္ဂိုလ်သေနတ်သမားကစား, ဂန္ထဝင်နှင့်လျှပ်စီး-အစာရှောင်ခြင်း Arcade သည် Modes နှင့်လက်တွေ့ကျကျလက်နက်များနှင့်ယာဉ်များတစ်ဦးလက်နက်တိုက်ပေးထားပါတယ်။ 4v4 အဖွဲ့ Deathmatch နှင့်ဖုတ်ကောင်သည် Modes featuring ။
အမွဲကြီးထွားလာ - အစဉ်အမြဲကြီးထွားလာခြင်းနှင့်တိုးချဲ့ PUBG MOBILE စောင့်ရှောက်သောသစ်ကိုဂိမ်း features နဲ့ Modes သာပို့ဆောင် Daily သတင်းစာဖြစ်ရပ်များ & စိန်ခေါ်မှုများနှင့်လစဉ်မွမ်းမံမှုများ။
ဝန်ဆောင်မှုအမည်: PUBGM ချုပ်
1. ရန်ပုံငွေများတစ်ချိန်ကအတည်ပြုခဲ့သည်သင့်ရဲ့ iTunes ကိုအကောင့်မှနုတ်ယူလိမ့်မည်။ အဆိုပါကြေးပေးသွင်းစျေးနှုန်းလစဉ်လတိုင်းသက်တမ်းတိုး $ 0.99 အမေရိကန်သည်။ PUBGM ချုပ် subscriber များအားတစ်နေ့လျှင် 5UC စုဆောင်းနိုင်ပြီးဆိုင်အတွက်အချို့ပစ္စည်းများကိုဝယ်ယူရန်ကို BP ကိုသုံးနိုင်သည်။
2. သာလျှင် 1 subscription ကိုမည်သည့်အချိန်တွင်မတက်ကြွဖြစ်နိုင်သည်။ သငျသညျ subscribe ပြီးတာနဲ့အမေရိကန် $ 0.99 ကိုအလိုအလျောက်သင့်ရဲ့ iTunes မှနုတ်ယူလိမ့်မည်သင်သည်သင်၏လက်ရှိစာရင်းသွင်းမှာမကုန်မီကအနည်းဆုံး 24 နာရီ cancel မဟုတ်လျှင်, သင့်လက်ရှိစာရင်းသွင်းမှာအဆုံးသတ်မတိုင်မီ 24 နာရီအကောင့်, သင်၏ subscription ကိုတစ်လသက်တမ်းတိုးလိမ့်မည်။
ဝန်ဆောင်မှုအမည်: PUBGM PrimePlus
1. ရန်ပုံငွေများတစ်ချိန်ကအတည်ပြုခဲ့သည်သင့်ရဲ့ iTunes ကိုအကောင့်မှနုတ်ယူလိမ့်မည်။ အဆိုပါကြေးပေးသွင်းစျေးနှုန်း $ 4.99 (ပထမအချိန်လျှော့စျေး; နောက်ဆက်တွဲစျေးနှုန်း $ 9.99 အမေရိကန်သည်) ကိုအမေရိကန်ဖြစ်ပါသည်, လစဉ်လတိုင်းသက်တမ်းတိုး။ PUBGM PrimePlus subscriber များအားတစ်နေ့လျှင် 20UC စုဆောင်းနိုင်ပြီးဆိုင်အတွက်အချို့ပစ္စည်းများကိုဝယ်ယူရန်ကို BP ကိုသုံးနိုင်သည်။
2. သာလျှင် 1 subscription ကိုမည်သည့်အချိန်တွင်မတက်ကြွဖြစ်နိုင်သည်။ သငျသညျ subscribe ပြီးတာနဲ့အမေရိကန် $ 9.99 ကိုအလိုအလျောက်သင့်ရဲ့ iTunes မှနုတ်ယူလိမ့်မည်သင်သည်သင်၏လက်ရှိစာရင်းသွင်းမှာမကုန်မီကအနည်းဆုံး 24 နာရီ cancel မဟုတ်လျှင်, သင့်လက်ရှိစာရင်းသွင်းမှာအဆုံးသတ်မတိုင်မီ 24 နာရီအကောင့်, သင်၏ subscription ကိုတစ်လသက်တမ်းတိုးလိမ့်မည်။
သင့်စာရင်းသွင်းမှုကိုပယ်ဖျက်ဖို့, သင့်ရဲ့အကောင့်ကို subscription ကိုဆက်တင်များသို့သွားနှင့်သင့် subscriptions ကိုစီမံခန့်ခွဲသို့မဟုတ်ဖျက်သိမ်းရန်က Settings-iTunes နဲ့ App Store မှာ-ကြည့်ရန် Apple က ID ကိုသွားပါ။
အဆိုပါ PUBG မိုဘိုင်း နဲ့ ကြည့်ရှုကျေးဇူးပြုပြီး
Tencent ဂိမ်းများ USER မှသဘောတူညီချက်: https:www.pubgmobile.comterms.html
တရားဝင် site ကို: http:www.pubgmobile.com
Facebook မှာ: http:www.facebook.comPUBGMOBILE
သင်သည်မည်သည့်မေးခွန်းများကိုရှိပါက PUBGMOBILE_CS@tencentgames.com မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုကိုဆက်သွယ်ပါ။
PUBG MOBILE အတြက္ စတိုးအသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
PUBG MOBILE အေပၚ စတိုး ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
PUBG MOBILE အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
PUBG MOBILE အား အခ်က္ျပပါ
ေကာင္းစြာ အလုပ္လုပ္ပါသည္ 49
လိုင္စင္ လိုအပ္သည္ 8
mr-robot-games စတိုး 6.78k 12.27M
PUBG MOBILE ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း PUBG MOBILE အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 0.14.0
ထုတ်လုပ်သူ Tencent Games
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ http://pubgmobile.proximabeta.com/privacy.html
လက်မှတ် SHA1: 3E:C8:CD:69:D7:1B:79:22:E2:A1:74:45:84:08:66:B2:6D:86:E2:83
ထုတ်လုပ်သူ (CN): Hector Lu
အဖွဲ့အစည်း (O): Tencent
နယ်မြေ (L): Shen Zhen
ပြည်နယ်/မြို့တော် (ST): Guang Dong
PUBG MOBILE APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ